မှုဟာသိပ် endometritis, ကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis - လက္ခဏာတွေ, ကုသ, ဆေးဝါးများ, endometritis အဘို့ပဋိဇီဝဆေး
မှုဟာသိပ် endometritis - ဘာရောဂါနှင့်ဘယ်လိုအတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှခြိမ်းခြောက်?
မှုဟာသိပ် endometritis အတိတ်ကလေးမွေးဖွား၏အကျိုးဆက်များမှာသောမီးယပ်ရောဂါများဆက်ဆံပါ။ ဘယ်အချိန်မှာမလွန်စေခြင်းငှါအရာချွဲသားအိမ်၏အမြှေးပါးနှင့်ကြွက်သားအလွှာ၏ရောင်ရမ်းခြင်းသက်ရောက်သည်။ ကိုချိုးဖောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ခေါ်ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသမှုနည်းလမ်းများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါစို့။
မှုဟာသိပ် endometritis - အကြောင်းရင်းများ
မှုဟာသိပ် endometritis ချင်းယခင်ကတည်ရှိခဲ့သည်ရှိရာဒေသအပေါ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ချင်း၏ခြားနားယခုအချိန်တွင်မှာသွေးကြောဒဏ်ရာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ရောဂါပိုးနှင့်ထိတွေ့သောဖွဲ့စည်းခဲ့ဒဏ်ရာမျက်နှာပြင်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အစဉ်အမြဲကူးစက်မဟုတ်ပါဘူး။ : အပါအဝင်ရောဂါဗေဒအစပျိုးခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ရန်
မကြာခဏရွှေ့ဆိုင် endometritis ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်လိုအပ်ချက်သားအိမ်၏ (နာလန်ထူ), lochia နှောင့်နှေး involution ၏ဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးနေသည်။ ထို့ကြောင့်ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောရောဂါပိုးအဖြစ် urogenital စနစ်အငယ်စားပမာဏပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောတွေနဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိ protrude ။ သူတို့တွင်:
cesarean အပိုင်းပြီးနောက် Endometritis
မွေးဖွားမကြာခဏဖြစ်ပေါ်စေအပိုကျင်းပနိုင်ရန်စစ်ဆင်ရေးအပြီး endometritis ဖြစ်ပေါ်နေသော။ ထို့ကြောင့်တဲ့အခါစီစဉ်ထား cesarean endometritis ကြိမ်နှုန်း 5% ထက်ကျော်လွန်ပေမယ့်အရေးပေါ်မှာမထားဘူး - 22-80% ။ မှုဟာသိပ် endometritis, cesarean ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်မကြာခဏအကြီးအကျယ်ပုံစံကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ mucosal အမြှေးပါး၏အပြင်ဘက်တွင်သားအိမ်နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း၏လျင်မြန်စွာပျံ့နှံ့ပေါ်ခွဲစိတ်၏ကူးစက်ရာမှဖြစ်ပါတယ်။ အခြားရောဂါများသည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏ရလဒ်အဖြစ်:
idiometritis - ထိုရှုံးနိမ့်ရဲ့ကြွက်သားအလွှာ;
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရောင်ရမ်းလုပ်ငန်းစဉ်၏သားအိမ်၏ဖြတ်သောမြို့ရိုးထဲမှာရုပ်ပျိုဖြစ်စဉ်များတစ်ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် suture ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့နိုင်ပါသည်။ ခက်ခဲသောကွောငျ့အဘယျသို့ lochia ထွက်သွား၏, သားအိမ်၏ contractile လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေခြင်းနှင့်အခြေအနေကပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်း။ ဒီရောဂါ 4-5 ရက်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်:
နှလုံးခုန်နှုန်းတစ်ခုတိုး - tachycardia ။
အမျိုးသမီးတွေအတွက်မှုဟာသိပ် endometritis ထွက်တင်ဆောင်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးစေခြင်းငှါ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ အတိတ်ကာလ။ သားအိမ်ထိခိုက် Tool ကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်, ဒီရောဂါဟာဖွံ့ဖြိုးဆဲများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုတိုးပွားစေပါသည်။ ဒါက endometrial အလွှာတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အဖြစ်မြေတပြင်လုံး mucosa ရောဂါပိုးနှင့်ထိတွေ့သောအနာမျက်နှာပြင်ဖြစ်လာသည်။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ဆေးဝါးထောက်ခံချက်များမရှိခြင်း endometritis များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်သည်။
ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် Endometritis - လက္ခဏာများ
အချိန်မီရွှေ့ဆိုင် endometritis detect နိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါရောဂါ၏လက္ခဏာများတိုင်းမိခင်ကိုသိသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်တွေ့ရုပ်ပုံပေါ် မူတည်. ၎င်း၏ attribute တွေဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ချိုးဖောက်မှုများ3ပုံစံများ, ခွဲခြား:
အပျော့စားပုံစံ။ 5-12 နာရီဖွံ့ဖြိုး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်၏အထွေထွေသက်သာချောင်ချိရေးဆန့်ကျင် 38-39 ဒီဂရီအထိမြင့်တက်။ ကနျြးမာရေး၏ပြည်နယ်အများကြီးခံရပါဘူး။ လူနာ 3-7 နေ့ရက်ကာလအဘို့ကြာရှည်ခံသောသားအိမ်ထဲမှာနာကျင်ခြင်းသတိထားမိ။ palpation ဆရာဝန်များကတွင်သားအိမ်၏အရွယ်အစားရှိအခြို့တိုးကဆိုသည်။ Lochia သွေးထွက်သံယိုဇာတ်ကောင်, စတင်ပြီးနောက်တောင်မှတစ်ပါတ်ဖြစ်ကြသည်။
ပြင်းထန်ပုံစံ။ ဒီရောဂါဟာကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် 2-4 ရက်ဖွဲ့စည်းသည်။ endometritis ၏ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ 25% အတွက်ရှုပ်ထွေးပေးပို့, ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးနောက် chorioamnionitis ၏နောက်ခံပေါ်တွင်ဖွဲ့စည်းသည်။ ရေရှည်, ပြောင်းလဲနေသောလေ့လာရေးတိုးတက်အောင်မပြုလုပ်သင့်နှင့်တစ်ဦးရက်အနည်းငယ်အတွင်းတစ်အနုတ်လက္ခဏာဒိုင်းနမစ်ရှိပေမည်။ အမျိုးသမီးများနေ့စိုးရိမ်ပူပန်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဝတ်ဆင်ပုံစံ။ ဒါဟာ 3-4 နာရီကစတင်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် 38 ဒီဂရီထက်မပိုပါဘူး။ လူနာအများစုပထမဦးဆုံးအညို lochia ထိုအခါမူကား, sukrovichnye သို့သွားပါ။ သားအိမ်နူးညံ့ကြင်နာမှု 3-5 နေ့ရက်ကာလအဘို့ဆက်ရှိနေသေး။ 5-10 ရက်အတွင်းပုံမှန်အဆိုပါကုထုံး၏အပူချိန်၏နောက်ခံဆန့်ကျင်။
ကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis ၏အဓိကအရိပ်လက္ခဏာ Calling ကအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့နဲ့အလင်းပုံစံမျိုးစုံထိုမိနျးမကိုကိုယ်လုံးဝနီးပါးကိုသတိမပြုမိဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မပြောပါရန်လိုအပ်ပေသည်။ သို့သျောလညျးကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis အမြဲဆင်းအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုထင်ရှား။ ကလေးငယ်တစ်ဦး၏မွေးဖွားသည့်သားအိမ်လိုင်စင်ကြယ်စေပြီးနောက် mom, ဖြေရှင်းနိုင် lochia ။ ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့ကခဲများနှင့်အနံ့မရှိဘဲ, တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းအနီရောင် Ting, ရှိသည်။ ပုံထဲကဟာရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနေစဉ်အတွင်းလုံးဝပြောင်းလဲစေပါသည်။
အစောပိုင်းကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis ဖွံ့ဖြိုးဆဲအခါ, lochia မကြာခဏအညိုရောင်အရိပ်ဆည်းပူး။ သူတို့ရဲ့စာမေးပွဲမှာအညစ်အကြေးပြည် detect နိုင်ပါတယ်။ ရှုပ်ထွေးထွက်သွားကြောင့်ဖွဲ့စည်းကြောင်းသွေးခဲရှိပါသည်။ တဖြည်းဖြည်းမနှစ်မြို့ဖွယ်အနံ့ယူစတင်နေကြသည်လွှတ်လိုက်ပါ။ အခြေအနေကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်သည်။ စာမေးပွဲတွင်မီးယပ်ကုလားထိုင်အတွက်မိန်းမ, ဆရာဝန်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှေးကွေးသားအိမ် diagnoses ။
ကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis ၏ရောဂါ
စူးရှကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis ရှာဖွေရေးမှာရန်, အတွေ့အကြုံရှိမီးယပ်သားဖွားကြေးမုံသုံးပြီးတင်းကျပ်စစ်ဆေးခံရလုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်ပေသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်အပြောင်းအလဲများအပေါ်သက်ရောက်မှုနှင့်လည်ပင်း။ ထို့ပြင်ဝမ်းဗိုက်အုတ်ရိုးကိုဖြစ်နိုင်သမျှနှင့်တစ်ဦး bimanual စာမေးပွဲမျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါမှာအဖြစ်ဖောက်ဖျက်ဟုသံသယရှိသူ။ "ကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis" ၏ရောဂါဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကို၏အခြေခံပေါ်မှာထိတွေ့သည်:
သားအိမ် (အေးဂျင့်အမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်) မှဘက်တီးရီးယားစိုက်ပျိုးမှုလိုသလိုဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့;
Endometritis - အကျိုးဆက်များ
သင့်လျော်သောကုသမှုမရှိခြင်းမှာဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းနှင့်အတူလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်, ပြဿနာများတစ်ဦးစွန့်စားမှုလည်းမရှိ။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်ယင်းရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကိုကျယ်ပြန့်လာပြီးကပ်လျက်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါမှလှုံ့ဆော်ပေး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဆရာဝန်တွေရောဂါများကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis အောက်ပါ fixed နေကြသည်:
pelvioperitonit - ထို peritoneal serosa ထွင်ထားတဲရောင်ခြင်း,
peritonitis - ထို peritoneum တစ်ဦးရောင်ရမ်းခြင်း,
thrombophlebitis - ထိုထွင်ထားတဲအတွက်သွေးကြောထိခိုက်ရောင်ရမ်းခြင်း,
တင်ပါးဆုံတွင်းအနာ - purulent တွင်လည်းမီးဖိုထဲက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မြို့ရိုးအရှိခြင်း,
မှုဟာသိပ် endometritis - ကုသမှု
ကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis ၏ကုသမှုရောဂါပိုးအမျိုးအစားနှင့်ရောဂါတော်ကိုနှိုးဆော်သောအကြောင်းကြောင့်တည်ထောင်ခြင်းဖြင့်စတင်။ ကုသမှု၏အခြေခံ antibacterial နဲ့ anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများပါဝင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆေးဝါးသတ်မှတ်ပေးရန် Parallel ။ lochia ၏ထွက်သွားတိုးတက်စေရန်, antispasmodics ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါသင်တန်းကိုအကောင့်ထဲသို့ချိုးဖောက်မှုအတိုင်းအတာနှင့်၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုကိုယူပြီး, တစ်ဦးချင်းစီကိုရှေးခယျြ။
Endometritis - ကုသမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ
endometritis အဘို့ပဋိဇီဝဆေးများသုံးစွဲနို့တိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခန့်အပ်။ ထို့ကြောင့် Semi-ဒြပ် penicillin အသုံးပြု cephalosporins ။ ထိုကဲ့သို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများများထဲတွင်ပုံမှန်ဖြစ်ရပါမည်:
မကြာခဏရက်ချိန်း metronidazole နှင့်ပဋိဇီဝဆေးများ lincomycin အုပ်စုတစ်စုစဉ်ပေါင်းစပ် mode ကိုသတ်မှတ်ထားသည့်။ နို့သို့ထိုးဖောက်အဖြစ်အဆုံးစွန်သော, နို့တိုက်စဉ်အတွင်းအသုံးပြုကြသည်မဟုတ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ကုထုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးနို့တိုက်ပေါ်ရပ်လိုက်နိုင်သည်။ ကုသမှု antibacterials တိုးတက်မှုဆေးခန်းပြီးနောက် 24-48 နာရီအကြာတွင်တော့ဘူး။
Dysmenorrhea သုံးစွဲပြီးတစ်ရှူး curettage ပြီးနောက်သားအိမ်လိုင်ထဲတွင်ရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အခါခွဲစိတ်ကုသမှုဖျော်ဖြေနေသည်။ ဒါဟာလည်းပါဝင်သည်:
အဆိုပါသားအိမ်လိုင်မျြးစိမျ့စိမျ့ပိုးသတ်ဆေး (furatsilin, ဒိုင်အောက်ဆင်းပါဘဲ 1%) ဆေး။
လြျှောစုပ်ယူယိုယွင်းထုတ်ကုန်များနှင့်အဆိပ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုလျှော့ချရန်အကြံပြုသည်။ ထို့အပွငျ, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအလွန် puruloid ခပြွီးပမာဏကို lochia ၏ဥတုတိုးတက်လျော့ကျစေပါတယ်။ ကိုင်တွယ်တဲ့အခါမှာသဘာဝကကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်မွေးဖွားအပိုင်း၏အမှု၌ 6-7 ရက်အကြာမှာ, 4-5 ရက်အကြာမှာထွက်ယူသွားတတ်၏။ ဤအချိန်တွင်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဆေးရုံ၌တည်ရှိ၏။
endometritis နှင့်အတူ Physiotherapy
အခါရောဂါ, endometritis, physiotherapy ကုသမှုအတွင်းသဘာဝသက်သာရာကိုကူညီပေးပါတယ်။ ဘုံတွေထဲမှာ:
Nemec သည်နှင့်အညီဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှာလက်ရှိကုထုံး - အကြိမ်ရေလျှပ်ကူးပစ္စည်း4မှတဆင့်ကောက်ယူအနိမ့်နှင့်အလတ်စားရေစီးကြောင်း၏အသုံးပြုမှုကိုကပါဝင်ပတ်သက်;
အနိမ့်အကြိမ်ရေ၏သွေးခုန်နှုန်းရေစီးကြောင်း - အစောပိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အသုံးပြု;
အပ်စိုက်ကုထုံး - တစ်ဦးအကျိုးရှိသောကိုယ်ခံစွမ်းအား-လှုံ့ဆော်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ကိုရွှေ့ဆိုင် endometritis ၏ကာကွယ်တားဆီးရေး
endometritis ရောဂါထုတ်ပယ်ရန်, ကာကွယ်တားဆီးရေးကိုယ်ဝန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၏စင်မြင့်မှာစတင်ရပါမည်။ သမားတော်များကဤအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားအကြံပြုသည်။ : ကာကွယ်တားဆီးရေး endometritis ကဲ့သို့သောလိုက်နာမှုအစီအမံများပါဝင်သည်
ကြိုတင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဖို့မျိုးဆက်ပွားစနစ်၏နာတာရှည်ရောဂါများ detection နဲ့ကုသမှု;
အင်္ဂါဇာတ်ကလေးမွေးဖွားမှုအတွက် contraindications စောင့်ရှောက်ခြင်း, အချင်း၏စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန, ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ cesarean ပြီးနောက်ပဋိဇီဝဆေးများ၏နိဒါန်း - အလုပ်သမားများ၏ဆင်ခြင်တုံတရားစီမံခန့်ခွဲမှု။
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ dilatation 1 လက်ချောင်း
Laktinet - ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက်အသုံးပြုမှုအတွက်ညွှန်ကြားချက်
ရေ၌ကလေးမွေးဖွား - မဖြေရှင်းနိုင်သို့မဟုတ်မဟုတ်လော
Menu က - သူငယ်ကိုမှထိခိုက်မှုမရှိဘဲကိုယ်အလေးချိန်တစ်ဦးသူနာပြုမိခင်အဖြစ်
ပြွန်တိုးမြှင် - အခါမွေးဖွား?
ကျန်းမာရေးအပေါ်ကို Save - တုပ်ကွေးရောဂါ၏ရိုးရှင်းသောကုသမှု
စီမံကိနျးအတှကျ tripod အပေါ်မျက်နှာပြင်
Latt-Art ခရစ္စမတ်လုပ်ဖို့ 10 အကြောင်းရင်းများ
နို့ဆီတွေနဲ့အိမ်တွင်းဒိန်ခဲ casserole - စာရွက်
"စတုဂံ" ၏ပုံ - အဘယ်အရာကိုဝတ်ဆင်ရန်,
Adelaide - ကမ်းခြေ
ဖက်ရှင်လက်ကိုင်အိတ် - Trends 2016
သူမ၏သမီးနှင့်အတူဓါတ်ပုံများ Ani Lorak
သားမွေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများနေ့ကိုဆောင်းတွင်းဖိနပ် - အရှိဆုံးဖက်ရှင်မော်ဒယ်၏ဓါတ်ပုံများကိုတစ်ရွေးချယ်ရေး